Uncwadi lokuhamba: iya kuba yintoni indawo ekuyiwa kuyo? | Uncwadi lwangoku
Uncwadi lokuhamba: iya kuba yintoni indawo ekuyiwa kuyo?
Kule mihla ndihamba ngeCuba, apho ndiye ndedwa ndiphethe incwadi enkulu yokubhala kunye nosiba ukuze kuthi ngoku ufunda oku kube kuphelile. Ngenxa yeso sizathu, kwaye kuba ndihlala ndiyenza xa ndingakwazi ukubhala in situ, Andikwazi ukucinga ngendlela ebhetele yokukukhuthaza ukuba unqamle kunonxibelelwano, ngakumbi uncwadi lokuhamba. Ibali elilandelayo, Isitalato i-21 Princess, yabhalwa ngexesha lokuya e-India, apho sadibana khona nabantu abaninzi, kubandakanya nendoda enegama eliyintsumantsumane oziinkwenkwezi kolu luhlu lulandelayo.
UIravan wayengenamfazi okanye bantwana. Eyona nto ayithandayo yayikukujonga esitratweni ngaphandle kokujonga okungenanto kunye noncumo lwe-beta, uhlobo olungaze luphele. Undikhuthazile ngovelwano kunye nosizi, kodwa bendisazi ukuba kutheni. Emva kokundixelela ngemonono kunye neNtshona awayeyincwina ngasese ecaleni kwendlela, wandimemela endlwini yakhe, eshiya umnyango uvulekile. Ingaphakathi lendlu lalikhangeleka okwevenkile yezinto zakudala ezinevumba lemasaala. Kwakukho ibhayisekile efihliweyo kwikona yegumbi lokuhlala, umfanekiso oqingqiweyo kaLakhsmi, kunye nesofa ekufanele ukuba wayilibale igosa laseRaj laseNgilani kwigadi yakhe exotic kwiinkulungwane ezidlulileyo. Ikhethini le-magenta likhusele isakhiwo esimnyama esimnyama esiphelayo sepaseji.
Umbuki zindwendwe khange andibuze ukuba ndifuna ukusela ntoni, ufike weza neiglasi ezimbini zewhisky namanzi endiphuze kancinci kancinci ngelixa ethatha ii-slugs ezinde. Undixelele ukuba kwiminyaka eyadlulayo wayehamba njengoomatiloshe enqanaweni eyayithutha ikhokhonathi iye kumazwe aseMeditera kwaye wayethandana neBarcelona. Amehlo akhe abonakala ngathi ayabhabha, ngoku kunakuqala, esiya kwezinye iindawo. Emva koko waqala ukundixelela ii-anecdotes malunga nokuphila ebhodini, malunga nabantu bezizwe ezininzi ababesebenza enqanaweni nangomhlobo wakhe, ogama lakhe andisalikhumbuli, owathi kungekudala wandibonisa ifoto. Bobabini bavele, abancinci kwaye bonwabile, benxibe iyunifomu yomkhosi wamanzi emhlophe ngelixa ngamnye ephethe ikhokhonathi kwisandla ngasinye. "Umhlobo osenyongweni," uqhubeke njalo. Kwaye amehlo akhe ayesibekele. Ukhawuleze watshintsha umxholo, mhlawumbi emva kokwazi imincili yomzuzwana, kwaye uqhubeke endibuza ngeSpain. Sithathe ithuba lokuthelekisa amaxabiso kwilizwe ngalinye, kwaye waqala ngokuchasa isizukulwana esitsha samaHindu apho ubudlelwane babantu babusephantsi kwemigaqo yokuziphatha engaphelelwa lixesha. Ukumbukela ethetha, wayebonakala eyindoda ecocekileyo emhlabeni, elazi ixesha nendawo awayehlala kuyo. Ndambuza ukuba kutheni engacingi ngokuhlala eYurophu, kodwa akazange aphendule, mhlawumbi ngenxa yokoyika ukuvuma ukuba wayelikhoboka lenkcubeko yakhe, yiyo loo nto ehlala elele yedwa esitratweni, ngenxa ithuba elitsha lokungena endlwini yakhe.
Phambi kokuba ndimke, waphinde wajonga ifoto wandixelela ukuba umhlobo wakhe utshatile, unabantwana kwaye uhlala eMadras. Undixelele ukuba akambonanga kangangeminyaka. Wayengasakhali, kodwa wayelusizi kunjalo, kwaye isizathu yayingengobukho bomgama nje.
Undikhokele waya emnyango emva kwesiqingatha seyure sencoko yobuhlobo kwaye washiya umnyango uvulekile kwakhona, mhlawumbi elinde ukuba utshintsho luzokufika kuye kungekabi semva kwexesha.
Ndiyathemba ukuba uyithandile.
Yeyiphi incwadi oqhele ukubheka kuyo xa ufuna ukuhamba?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Uncwadi lokuhamba: iya kuba yintoni indawo ekuyiwa kuyo?
Iphumla phi imiphefumlo? Ufakelo olutsha lukaEthan Bush
Iingcaphuno ezili-15 ezivela kuCharles Dickens